राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारहरूले कसरी ईमेल मार्केटि Using प्रयोग गर्दैछन् Martech Zone
बिहीबार, जुन 30, 2016 बिहीबार, जुलाई 28, 2016 Douglas Karr
केही चुनाव पहिले, मैले यो ब्लगमा केही राजनीतिक लेख पोष्ट गर्न गल्ती गरे। मैले सि horn्गको गुँडमा जेब पारे र त्यसको बारेमा महिनौं सुने। यो राजनैतिक ब्लग होईन, यो मार्केटिंग ब्लग हो, त्यसैले म आफ्नो टिप्पणीहरू आफैंमा राख्छु। तपाईले मलाई फेसबुकमा फटेको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनियो, मार्केटिंग बिल्कुल हरेक अभियान को लागी आधार हो।
यस अभियानमा हामी देख्छौं डोनाल्ड ट्रम्पले एक ट्रस्ट प्रोफेश्नलको रूपमा परम्परागत मिडिया कुकुरलाई हल्लाउँदै। उहाँ बर्ष सालको लागि रोशनीमा छ र मान्छे उहाँलाई कसरी कुरा गर्ने भनेर बुझ्नुहुन्छ। र यसमा कुनै श doubt्का छैन कि रिपब्लिकनका बाँकी उम्मेदवारहरू सबै बाटोमा खसेका छन्। जबकि यसले कुख्यातता बनाउँदछ, यसले उनलाई अभियान जित्न सक्दैन।
ईमेल हाम्रो अनलाइन परिचयको द्वारपाल भएको छ। यस तरिकाको बारेमा सोच्नुहोस्, कति ईमेलहरू र सेवाहरू साइन इन गर्छौं हाम्रो ई-मेल द्वारा? यसले ईमेल बनाएको छ, यदि सहि रूपमा प्रयोग भयो भने, कुनै पनि उद्योगको सब भन्दा कुशल मार्केटि tools उपकरणमध्ये एक हो, जुन हाम्रो सर्वेक्षण डाटामा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। धेरै व्यक्तिको लागि जे होस्, यी कारकहरूले ईमेल पनि समय खपत गर्ने र संगठनात्मक दलदल बनाए। हामीले सिर्जना गरेको कारण यो हो अल्टो मेल, ईमेल प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलैसँग तिनीहरूको सबै मेलबक्सहरू प्रबन्ध र ट्र्याक गर्न मद्दत गर्न। मार्सेल बेकर, एओएल मा मुख्य उत्पाद निर्देशक
हामीले पहिले नै केहि चुनावहरू देखेका छौं जहाँ डिजिटल मार्केटिंग फ्रन्टले वास्तवमा के महत्त्व राख्दछ। उनको पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपति ओबामाको टोलीले मैदान खेल्यो जुन इतिहासमा सब भन्दा ठूलो दाता र राजनैतिक कार्य डेटाबेस बनायो। Bernie Sanders 'अभियान टीम स्पष्टतः उनको उदाहरण अनुसरण गरे। जबकि Sanders प्राथमिक जीत छैन, आफ्नो दाता डाटाबेस कोष को एक विशाल रकम उत्पादन गरेको छ, सबै साना वेतनमा सबै। हिलारी क्लिन्टनले केही समयको लागि प्रजातान्त्रिक डेटाबेसमा पहुँच गरेको बेला पार्टीले दुबै उम्मेदवारहरूको नियन्त्रण छोड्नु अघि उनले त्यसो गरे।
राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार ईमेल उपयोग हाइलाइटहरू
हिलारी क्लिंटन प्याक मा नेतृत्व ईमेल सदस्यता। उत्तरदाताहरूको% 46% हिलारी क्लिन्टनको ईमेल अभियानको सदस्यता बनाम ie%% Bernie Sanders को र २२% डोनाल्ड ट्रम्पको लागि।
ईमेल मुख्य रूपमा प्रयोग गरिएको छ पैसा उठाउ। आधा भन्दा बढी उम्मेद्वार अभियान ईमेलहरू (% 57%) मुख्यतया दानमा केन्द्रित छन्। हिलारी क्लिन्टनको अभियानमा चन्दा दिएको रिपोर्ट गर्ने of।% व्यक्तिहरूले डोनाल्ड ट्रम्पका १%% समर्थकहरूको तुलनामा ईमेलद्वारा त्यसो गर्न राजी भए।
ईमेल र सोशल मीडिया सबैभन्दा ग्रहणशील हो मार्केटिंग च्यानलहरू, उत्तरदाताहरूले ईमेल (१%%) र सोशल मीडिया (१%%) लाई अभियान जानकारी प्राप्त गर्न उनीहरूको मनपर्ने विधिको रूपमा रिपोर्ट गर्छन्।
यो एक मार्केटिंग दृष्टिकोणबाट एक आकर्षक चुनाव हो। जबकि अनुमोदन दरहरू निराश छन् र उम्मेदवारहरू सेन्ट्रिष्ट पदहरूबाट टाढा भइरहेको देखिन्छ, परम्परागत र डिजिटल माध्यमहरू मार्फत प्रतिक्रिया दरहरू चार्ट बाहिर छन्। यो नोभेम्बर आउने उम्मेद्वार को मार्केटिंग खेल को प्रत्येक को प्रभाव देख्न आकर्षक लाग्नेछ। अल्टो मेल सँगै राखियो डाटामा यो इन्फोग्राफिक.
टैग: बर्नी Sandersडोनाल्ड ट्रम्पदानकोचुनावहिलारी क्लिंटनपैसाराजनीतिक कार्यराजनीतिक चन्दाराष्ट्रपतिराष्ट्रपति चुनाव